Madagasikara : Manahy izay mety ho fiantraikan’ny krizy Ekônômika ireo mpiblaogy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Oktobra 2008 15:10 GMT
Raha tsy mitsaha-mitombo ny krizy, ireo kandida ho filoham-pirenena Amerikana roa lahy, ireo mpitondra Erôpeana sy lohandohany amin'ireo fikambanana iraisam-pirenena dia samy manambara fa voatery ahena ireo fanampiana iraisam-pirenena. Ireo firenena an-dalam-pandrosoana toa an'i Madagasikara izay mbola mianki-doha fatratra amin'ny fanampiana iraisam-pirenena dia manahy mafy satria manambana ireo ezaka izay efa tanteraka eo amin'ny lafiny fampandrosoana sy ny fampihenana ny fahantrana fara-hidiny izany fampihenana fanampiana izany.
Moa ve hisy fiantraikany any Madagasikara ny krizy iraisam-pirenena, ary amin'ny endrika ahoana ? Madagascan no manolotra fanazavana :
“Raha fehezina, eny, tsy maintsy hisy fiantraikany any Madagasikara ny krizy iraisam-pirenena ankehitriny. Voalohany aloha satria mazava ho azy fa ahenan'ireo firenena mpanome ireo fanampiana fanaony ny firenena andalam-pandrosoana toa antsika. Manarak'izany, ireo tetikasa goavana efa natomboka any an-tanindrazana ankehitriny, tsy ho ela dia hisedra fahasarotana amin'ny famatsiana azy ho tontosa. Antony farany, miankina betsaka amin'ny fizahatantany ny harinkarentsika, hihena koa anefa ireo mpizahatany.”
Randy do it, mpanao gazety Malagasy sady mpiblaogy, dia manolotra fanoharana tsotra mora azo izay entiny anazavana ny tsenam-bola [bourse] amin'ny alalan'ny varotra Rajako :
“Raha vao lasa ilay Mpampiasa azy, dia novorian'ilay mpiasany ireo olona tao an-tanàna, notondroiny ireo garabà mitahiry ireto Rajako aman'arivony izay efa novidian'nny mpampiasa azy. “Raha sitrakareo” hoy izy tamin'ireo vahoaka nanatrika azy, dia “hivarotako amin'ireto Rajako ireto ianareo, 35.- $ isany. Amin'izay rehefa miverina ny mpampiasa ahy dia azonareo amidy 50.- $ aminy.” Jamban'izany fampanantenana vola mora azo izany ireo mponina tao an-tanàna ka dia samy namoaka ny tahiriny rehetra ny tsirairay avy, ary samy nivarotra izay fananany mba hividianana ireto Rajako. Rehefa voa-angona anefa izato harena, dia nanjavona tao anatin'ny indray alina monja ilay mpiasa, ary samy tsy nisy hita niverina tao an-tanana intsony na izy na ilay mpampiasa azy. Foana ny haren'ilay tanana, tsy misy afa-tsy ireto Rajako izay miriaria ombieny ombieny [ndlr. tsy misy mpividy]. Toy izao no fomba amaranan'i Nadim Kalife ny tantarany : “tongasoa amin'ny tontolon'ny tsenam-bola iraisam-pirenena !” Mazava, fa misy tsy fitandremana ihany ny mihevitra fa ny Rajako izay namidy 10.- $, avy eo novidiana 35.- $ dia mbola hisy hividy 50.- $ ihany.”
Farany, i Volana na i Moonlight girl, mpiblaogy vao nanomboka ao Antananarivo isan'ny tarika FOKO Blog Club, no mitantara izay andavan'andron'ny fahantrana fara-hidiny sy izay fiantraikany amin'ny lafiny ara-pahasalamana hoan'ny maro an'isa any Madagasikara. Amin'ny alalan'izay natrehiny tao anaty fiara fitanteram-bahoaka tany Antananarivo vao tsy ela :
“Nanomboka nitomany izato ramatoa ary nambarany fa vao avy teraka izy roa andro lasa izay tany amin'ny Hôpitalim-panjakana fanta-bahoaka [ndlr. eto Antananarivo]. Mahantra izy ka tsy nanana izay vola ho enti-mividy ireo fanafody nilaina raha latsak'aretina tampoka izato zanany. Ao amin'io Hôpitaky io, rehefa tsy manam-bola hividianana fanafody ianao dia midika izay fa miandry fotsiny izay ahafatesanao eo. Tsy misy miraharaha izay mombamomba anao akory. Maty ny zanany, ary satria tsy nanam-bola hitondrana ny taolam-balon-janany mody izato reniny. Any Ambatofotsy izay lavitra an'Antananarivo mantsy izy no mipetraka. Anefa tsy laitra raha izay ho saran'ny fiarakaretsaka. Tapa-kevitra ary izy fa hitondra ny fatin-janany ho any amin'ny rahavaviny eny Ambohipo. Sady vaki-fò nahonena aho no tora-kovitra teo anilan'ity ramatoa izay miriaria miaraka amin'ny fatin-janany ity. Nanomboka tezitra anefa ny aide-saofera ka nikiakiaka azy ary nanery azy hidina ny fiara fitanteram-bahoaka [ndlr. miaraka amin'ny vava]. Nambarany fa tena nanao zava-pady mihitsy ity ramatoa ity, mitondra maty anivon'ny velona. Nandao ilay fiara ilay ramatoa fa tsy te hitarika olana hafa intsony.”